Mobile House: Huawei U8825D အတွက် Android Version 4.1.1
Huawei U8825D အတွက် Android Version 4.1.1
Huawei U8825D အတွက် Android Version 4.1.1 ကို Mobile House မှ ဖန်တီး ပေး လိုက် ပါ တယ် ။
Camera ကနောက်ဆုံး android version 4.2 ကဟာထည့် ပေးထားပါတယ်။
Myanmar ဖောင့်ထည့် ထားပြီး ။
Myanmar Keyboard ထည့်ထားပြီး ။
Google Application များ ထည့် ထားပြီး ။
sd format ရိုက် ထားတဲ့ ထဲ ထည့် ပြီး custom recovery ကနေ install from sd က သွင်းလိုက်ပါ ။
ပြီးလျှင် wipe data/factory reset
နှစ်ခု လုံးလုပ် ပေးလိုက်ပါ ။
ပြီးမှ reboot system now
install လုပ်ပြီး တက်တက် ခြင်း အနက် ရောင် နဲ့ ၂မိနစ် လောက် စောင့် ပါ သူဘာသူ တက်လာ ပါလိမ့် မယ် ။
error နည်းနည်း ရှိ နေ သေးပါတယ်။
Posted by Ye Yint Aung at 8:34 AM
targyi November 23, 2012 at 5:38 AM
အကို ကျွန်တော်လုပ်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ instruction ပေးတဲ့အတိုင် ပဲလုပ်ပါတယ်။လုံးဝကိုမရဘူး။ကျေးဇူပြု၍ detail ပြော်ပြပေးပါဗျာ။
Mobile House November 24, 2012 at 7:41 AM
ဘယ် အဆင့် မှာမ ရ တာ လဲ အတိကျ ပြော ပေးပါ ။
Pyae Phyoe Maung November 26, 2012 at 8:13 AM
ကျွန်တော်လုပ်တာတော့ တစ်ခါတည်းနဲ့ ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ setting ထဲက sound ကဖွင့်လို့မရဘူးအစ်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် unfortunately.setting has stoped ဆိုတာပဲပေါ်လာတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါအုန်း အစ်ကိုရေ
targyi November 27, 2012 at 9:52 PM
အကိုကျွန်တော် cwm ကနေသွင်းတော့ aborted ပဲပြ ပါတယ်။wipe data လည်းလုပ်ပါတယ်။မရပါ။ကျွန်တော့်ဖုန်းက root ပြီးသားဖြစ်နေလို့လား။ကူညီပေးပါဗျား။
Mobile House November 28, 2012 at 7:36 AM
sd card error ကြောင့် လဲ ဖြစ် တက် ပါ တယ် ။ဒေါင်း တဲ့ချိန် ဖိုင် ပျက် ရင် လဲ ဖြစ် တက် ပါတယ် ။sd ကဒ် အကောင်း သုံးပါ ။
Mobile House November 29, 2012 at 10:18 AM
သိန်းဇော် ရေ recovery က error တက် တာ ပါ ။recovery နောက် တစ် ခါ ထပ် သွင်း လိုက် ပါ ။4.1.1 တင် ကြည့် ပါ ။ ပြီး တာ နဲ့ recovery ကို တခါ တည်း သွင်း ပြီး မှ reboot ချ ပါ ။မရ ရင် သူ့ နဲ့ ဆိုင် တဲ့ offical firmware ၃ ခု လောက် ရှိ ပါတယ် စမ်း တင်ကြည့် လိုက် ပါ ။
Than Htike Aung December 12, 2012 at 5:12 PM
အစ်ကို ကျွန်တော့် Firmware ကို huawei ဆိုဒ်က နောက်ဆုံး Firmware တင်ထားတာပါ အရင် Firmware တုန်းက camera က ရ တစ်ချက် မရတစ်ချက် ဖြစ်နေလို့ နောက်ဆုံး Firmware တင်လိုက်တာ အရှေ့ကင်မရာ လုံးလုံး ကို မရတော့ပါဘူး အဲ့ဒါ ဒီဟာ တင်လိုက်ရင်ပြန် ကောင်းနိုင်မလား?
မီးငယ်လေးအတွက်စုစည်းမှု December 13, 2012 at 7:01 PM
တင်ရတာ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်..ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်သုံးရင် google တို့ Youtube တို့ တော်တော်များများကို ဖွင့်လို့မရဘူး.. facebook တစ်ခုပဲ ချောချောချူချူသုံးလို့ရတယ်.. PC နဲ့ချိတ်သုံးရင် gtalk တောင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်... ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး..ကူညီပါဦး..
Than Htike Swe January 6, 2013 at 7:30 AM
Firmware ကြောင့်ဖြစ်တာပါ ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဖူးပါတယ် official တင်လိုက်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
မီးငယ်လေးအတွက်စုစည်းမှု December 13, 2012 at 7:06 PM
ပီးတော့ ringtone က PC နဲ့ ချိတ်လိုက်ရင် auto default change သွားတယ်... အဲဒိ system\_media\_audio\_ringtone ထဲကို ogg file ဘယ်လိုထည့်လို့ရမလဲ..
Sai Sinewan December 15, 2012 at 2:47 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဒီနေ့firmware အသစ်တင်တာအောင်မြင်တယ်ဗျာကျေးဇူပါအစ်ကို
Thu Zin Heine December 15, 2012 at 10:40 AM
အစ်ကိုရေ ဘယ်လိုဒေါင်းရမှာလည်းဗျာ....ကျွန်တော်ဒေါင်းတာမရဘူးဖြစ်နေတယ် တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဗျာ...4.1.1 လေးလိုချင်လိုပါဗျာ ကူညီပါနော်.....ကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်....
Mobile House December 25, 2012 at 5:58 AM
hotfile အကောင့် မရှိ တဲ့ သူ တွေ က ညဖက် ၁၂ ကျော် မှ ဒေါင်းရင်အဆင်ပြေပါတယ် ။သူ က တစ်ခါ ဒေါင်း ဖို့ ၁၅ မိနစ် လောက် စောင့် ရပါတယ် ။
Sai Sinewan December 16, 2012 at 6:20 AM
firmware အသစ်ကျန်တာအဆင်ပြေတယ်.........ဒါပေမဲ့ internet google တို့ မြန်မာဆိုဒ်တွေဝင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်
Mobile House December 25, 2012 at 5:56 AM
ဘယ်လို ၀င် မရ တာလည်း error တက်တာလား တစ်ချက် သေချာပြော ပေးပါ
Sai Sinewan January 16, 2013 at 6:10 PM
ဒီလိုပါကျန်တာအကုန်အဆင်ပြေတယ် ကျွန်တော်ဖုန်းကို S3 firmware ကော 4.1.1 firmware ကောတင်ကြည့်ဘူးတယ်
internet သုံးတော့ google ကိုဝင်တာမရဘူး...........ဖြစ်နေတာနဲ့နဂိုfirmware ပဲပြန်တင်လိုက်တယ်............
David Moee December 24, 2012 at 7:04 AM
တင်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကင်မရာက ရှေ့နောက် ခှည့်မရပါ ရှင်းလို့နိုင်မလား
David Moee December 24, 2012 at 7:05 AM
တင်လို့ရပါတာ် ကင်မရာ က ရှေ့နောက်လှည့်မရပါ
Mobile House December 25, 2012 at 5:55 AM
ဘယ်လို လှည့် မရတာ လဲ ? error တက်တာလား ?
Than Htike Swe January 6, 2013 at 7:47 AM
အကို hotfile မဟုတ်တဲ့တခြားလင့်ကတင်ပေးပါလား။resume supportမရလို့ပါ၊ hotfile ကို premium link generator ရှာတာလဲမတွေ့လို့ပါ ၊ကျွန်တော်ဆို ၉၃%ရောက်မှပျက်ကျသွားလို့ပါ။ Mediafire Ziddu Turbobit uploaded rapidshare 4shared frakeshare တို့ကနေတင်ပေးပါလားခင်ဗျာ မြန်မာ့ကော်နက်ရှင်အကြောင်းကို သိတဲ့အကိုမို့လို့ရက်ရက်စက်စက် hotfile ကတင်တာ။
အကို hotfile ကတင်တဲ့အတွက်တော့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး
Mobile House January 6, 2013 at 10:51 AM
တခြား အကောင့် ကတင် ရင် ခဏ နဲ့ လင့် ပျက် လို့ ပါ ။ဒီအကောင့် က ၀ယ် ထားတော့ လင့် မပျက် လို့ ပါ ။ညဖတ် စိတ် ရှည်ရှည် ထားဆွဲ ပါ ။ ည ၁ နာရီ လောက်ဆို ကောင်းပါတယ် ။
Than Htike Swe January 9, 2013 at 4:10 AM
Than Htike Swe January 9, 2013 at 4:16 AM
အကိုတင်ပေးထားတာက jellybean မဟုတ်ပါဘူး cwm ကနေ install လုပ်တော့ bbs.shendu.com ဆိုတာတွေ့တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် camera ကတော့လန်းတယ် ရှေ့နောက်တော့ မလှည့်တတ်ဘူး
Mobile House January 9, 2013 at 6:36 AM
4.1.1 နဲ့ မခြား အောင် ပြု ပြင် ပေးထားပါတယ် ။ camera က တော့ စခရင် ကို ဖိ ထားလိုက် ရင် camera နဲ့ မြှားလှည့် နေ တဲ့ ပုံ လေး ပါ တွေ့ ရပါမယ် ။အဲ့ ကောင်နိုပ် လိုက်ပါ ။အ ပေါ် ပုံ မှာ လဲ ကြည့် လို့ ရပါတယ် ။
Константин Преснецов January 23, 2013 at 4:55 AM
4.1.1 it's realy good!
moelay February 2, 2013 at 1:49 PM
အစ်ကိုရေကျွန်တော်ကတော့ဒေါင်းတာရတာနဲ့ စမ်းလိုက်တော့မယ် သုံးချင်နေတာကြာပြီဆိုတော့ကျေးဇူးပါနော်
Yoon Naychi February 10, 2013 at 9:03 PM
custom recovery so tar bal ka win ya tar lal pyaw pya pae par,,, thanks...
win-nyi March 13, 2013 at 3:31 AM
တင်လိုက်တိုင်း fail ဖြစ်ပြီး aborted ပဲဖြစ်နေတယ်ဗျ... CWM ကြောင့်လားမသိပိုဆိုးတာက icon တွေမှာစာတွေပါပျောက်ကုန်တယ်...official ပြန်တင်ရတော့မယ်ထင်တယ်
i9000 အတွက် android 4.2 rom
Update Galaxy Ace S5830 with 4.1 Jelly Bean